Ciidamada Puntland Oo Howlgal Ka Fuliyey Dhulka Buuraleyda Ee G/ Bari - Horn Cable TV
Ciidamada Puntland Oo Howlgal Ka Fuliyey Dhulka Buuraleyda Ee G/ Bari
0	Apriil 14, 2018 10:27 am
Ciidamada Badda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay howlgallo ka sameeyeen deegaano ku yaalla Dhulka Buuraleyda ah ee Gobolka Bari, waxana ay sheegeen inay la dagaalami doonaan kooxaha aragagixada ah ee ku dhuumaalaysanaya deegaanadaasi.
Saraakiisha ciidamada hogaamineysa ay sheegeen in uu yahay howlgalkaas mid amniga lagu xaqiijinayo.
Saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in heegan buuxa la geliyey ciidamada Badda Puntland qeybtooda la- dagaalanka argagaxisada kadib markii tiro ka dhowr jeer miinooyin ay ku waxyeeloobeen Ciidamo ka tirsan Puntland iyo dad Shacabka ah ee kunool deegaanadasi.
Taliyaha Ciidanka Badda Puntland S/guuto: Cabdirisaaq Diiriye ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen howlgal ka dhan ah Al-Shabaab iyo kooxda Daacish, ku waasi oo ku dhuumanaya deegaanada Buuraleydah ee ka tirsan Gobolka Bari.
Taliyihii Nabadsugidda Gobolka Hiiraan oo Xilkii Laga Qaaday.
Ruushka Iyo Xulafadiisa Oo Ka Jawaabay Duqayntii Suuriya.